ECN ဆိုတာဘာလဲ စစ်မှန်သော ECN Forex ပွဲစား၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုလေ့လာပါ
ECN Forex Trading ကဘာလဲ?
ECNများအတွက်ရပ်တည်ရာ အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်တကယ်တော့နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ရေးစျေးကွက်အတွက်အနာဂတ်လမ်းပဲ။ ECN အကောင်းဆုံးကို FOREX ECN ပွဲစားများမှတစ်ဆင့်စျေးကွက်သေးငယ်သောစျေးကွက်တွင်ပါ ၀ င်သူများအား ၄ င်း၏ငွေဖြစ်လွယ်မှုပံ့ပိုးသူများနှင့်ဆက်သွယ်ပေးသောတံတားအဖြစ်ဖော်ပြနိုင်သည်။
ECN သည်စျေးကွက်၏သေးငယ်သောပါ ၀ င်သူများနှင့် ၄ င်းတို့၏ငွေဖြစ်လွယ်ပံ့ပိုးသူများအကြားပေါင်းကူးအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ အခြားကုန်သွယ်မှုစနစ် (ATS) အဖြစ်လူသိများသည်။ ECN အစဉ်အလာဖလှယ်မှုပြင်ပရှိငွေကြေးနှင့်အစုရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှုကိုပံ့ပိုးပေးသောကွန်ပျူတာကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
မှတ်သားဖွယ်အချက်မှာအရောင်းအ ၀ ယ်အားလုံးကို ၁၉၇၀ ပြည့်နှစ်များမတိုင်မီကကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်၊ ထိုအချိန်တွင်အီလက်ထရောနစ်ကုန်သွယ်မှုအားလုံးနီးပါးသည် Reuters မှ Reuters မှတီထွင်ထားသောအဆင့်မြင့်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ခေတ်မီအီလက်ထရွန်နစ်ကုန်သွယ်ရေးစနစ်များသည် ၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအစောပိုင်းတွင်သူတို့စျေး ၀ ယ်ဈေးနှုန်းစံချိန်စံညွှန်းဖြစ်လာရန်အတွက် ၀ ယ်သူများနှင့်ရောင်းသူများနှင့်လိုက်ဖက်ရန်စတင်သောအခါပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ၎င်းအီလက်ထရွန်နစ်ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်များသည်အစောပိုင်းကမရှိခဲ့ပါ။ တကယ်တော့သူတို့ဟာ ၁၉၆၀ ပြည့်နှစ်တွေနှောင်းပိုင်းကတည်းကတည်ရှိခဲ့ပေမယ့် ၁၉၉၀ နှောင်းပိုင်းအထိငွေကြေးအရောင်းအ ၀ ယ်တွေမှာမသုံးခဲ့ကြဘူး။
ပထမ ဦး ဆုံးအရာ - သင်၏ပွဲစားကိုသိပါ
Forex စျေးကွက်သည်ကုန်သည်များအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးစျေးကွက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီနေရာမှာအမြတ်အစွန်းဟာငွေကြေးအတွဲတွေထဲကအနည်းဆုံးဈေးနှုန်းအတက်အကျကြောင့်ဖြစ်တယ်။ နှင့်အစုရှယ်ယာများသို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကုန်သွယ်ခြင်းနှင့်မတူသည်မှာနိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုကုန်သွယ်မှုသည်ပုံမှန်ငွေကြေးလဲလှယ်မှုတွင်မဖြစ်ပေါ်ပါ။
၎င်းအစားကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှ ၀ ယ်သူများနှင့်ရောင်းသူများအကြား၊ အဝေးမှ (OTC) စျေးကွက်မှတစ်ဆင့်ဖြစ်ပျက်သည်။ ပြီးတော့ဒီစျေးကွက်ကို ၀ င်ရောက်ဖို့သင့်ကိုပွဲစားတစ် ဦး သုံးဖို့လိုတယ်လို့ပြောစရာမလိုပါဘူး။
၎င်း၏ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုမရှိသောအခြေအနေကြောင့်မှန်ကန်သောပွဲစားကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်သင်၏ Forex ကုန်သွယ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွင်အောင်မြင်မှုနှင့်ကျရှုံးမှုတို့၏ခြားနားချက်ကိုဆိုလိုသည်။ စျေးကွက်တွင်အလားတူထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးသည့်ပွဲစားများစွာရှိနေသော်လည်းသင် Forex trading မစတင်မီပွဲစားအမျိုးအစားများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရမည်။
အဓိကအားဖြင့် Forex trading ဈေးကွက်တွင်ပွဲစားနှစ်မျိုးရှိသည်။ Market Makers နှင့် ECN Brokers ။ နာမည်ကဖော်ပြသည့်အတိုင်း Market Makers များသည်လေလံဆွဲသူများကိုစျေးကွက်ထဲသို့ခေါ်ဆောင်သောပွဲစားများဖြစ်သည်။ သူတို့သတ်မှတ်ထားသောစျေးနှုန်းများသည်သူတို့၏ပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်ပြသနိုင်သည့်အလားအလာရှိသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားကုန်သွယ်ရေးရာထူးများကိုဖွင့ ်၍ ပိတ်နိုင်သည်။
ECN - Forex ပွဲစား၏ 'Purest' အမျိုးအစား
Market Makers နှင့်ဆန့်ကျင်သည် အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက် (ECN) ပွဲစားများသည်ပြန့်ပွားမှုကွဲပြားမှုအပေါ်အမြတ်အစွန်းမယူသော်လည်းရာထူးများအတွက်ကော်မရှင်ကိုကောက်ခံသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များ၏အနိုင်ရရှိမှုသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အနိုင်ရခြင်းဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ်ပါကမည်သည့်အမြတ်မှမရရှိနိုင်ပေ။
ECN ပွဲစားများ ၄ င်းတို့၏ဖောက်သည်များကိုအခြားစျေးကွက်တွင်ပါ ၀ င်သူများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်သူတို့၏ရှုပ်ထွေးသောအီလက်ထရောနစ်ကွန်ယက်များကိုအသုံးပြုသောဘဏ္expertsာရေးကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်သည်။ မတူညီသောပါ ၀ င်သူများထံမှကိုးကားချက်များကို စုစည်း၍ ECN ပွဲစားများသည်လေလံ / လေလံဆွဲခြင်းကိုပိုမိုတင်းကျပ်စွာကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။
ကြီးမားသောဘဏ္institutionsာရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်စျေးကွက်ကုန်သည်များကိုတာဝန်ပေးခြင်းအပြင် ECN ပွဲစားများသည်တစ် ဦး ချင်းကုန်သွယ်ရေးဖောက်သည်များကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ ECNs သည်သူတို့၏ဖောက်သည်များအားစနစ်တစ်ခုပေါ်သို့လေလံများနှင့်ကမ်းလှမ်းမှုများပေးပို့ခြင်းဖြင့်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ကုန်သွယ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
၏ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုမှာ ECN ၀ ယ်သူရောရောင်း ၀ ယ်သူနှစ် ဦး စလုံးသည်ကုန်သွယ်ရေးကွပ်ကဲရေးအစီရင်ခံစာများတွင်အမည်မသိဖြစ်နေသည်။ ECNs များကိုအရောင်းအ ၀ ယ်သည်ငွေကြေးဖောင်းပွမှုအားလုံး၏အကောင်းဆုံးလေလံ / တောင်းနှုန်းများကိုပေးသောတိုက်ရိုက်လဲလှယ်မှုနှင့်တူသည်။
ECNs မှတစ်ဆင့်ကုန်သည်များသည်စျေးနှုန်းချိုသာပြီးကုန်သွယ်ရေးစျေးနှုန်းချိုသာသည် ECN ပွဲစား ကွဲပြားခြားနားသောငွေဖြစ်လွယ်ပံ့ပိုးပေးသူများထံမှစျေးနှုန်းများကိုခွင့်ပြုပေးနိုင်သည်။ ထို့အပြင် ECN ပွဲစားတစ် ဦး မှပေးသောကုန်သွယ်မှုပတ်ဝန်းကျင်သည် ပိုမို၍ ထိရောက်မှုရှိပြီးပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေသည်။
ECN ၏အားသာချက် - အဘယ်ကြောင့်သင် ECN ပွဲစားတစ် ဦး နှင့်ကုန်သွယ်သင့်သနည်း
တစ်ဦးအသုံးပြုခြင်း ECN ပွဲစား အားသာချက်များစွာရှိသည်။ တကယ်တော့ကုန်သည်အမြောက်အများဟာ ECN ပွဲစားများကိုမျှော်လင့်နိုင်ပြီးခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်ရှိကြသည်။ ECN ပွဲစားများသည်အဓိကအကျိုးကျေးဇူးများကိုပေးစွမ်းနိုင်ပြီး၎င်းသည်၎င်းတို့အား ဦး ဆောင် ဦး ရွက်ပြုသူများရှေ့တွင်တိုးတက်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ဒီမှာ ECN ပွဲစားတစ် ဦး ကိုသုံးခြင်း၏အဓိကအားသာချက်များကိုတွေ့နိုင်သည်။
သင်သည် Forex trading နှင့်ဆက်ဆံသည့်အခါများသောအားဖြင့်သင်သည်ဖွင့်ထားသောစာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ECN ပွဲစားတစ်ယောက်၏လမ်းစဉ်ကိုသင်သွားရန်ရွေးချယ်သောအခါ privacy နှင့်လျှို့ဝှက်ချက်များသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ မြင့်မားသောလျှို့ဝှက်ချက်နှင့်လျှို့ဝှက်ချက်သည်ပွဲစားသည်စျေးကွက်ပြုလုပ်သူအစားစျေးကွက်တွင်ကြားခံအဖြစ်သာထမ်းဆောင်မည့်အချက်နှင့်အမှန်ပင်သက်ဆိုင်သည်။
ကုန်သည်များကို ECN အေးဂျင့်တစ် ဦး နှင့်အထူးအကောင့်မှတစ်ဆင့်စျေးနှုန်းများကိုအဟန့်အတားမရှိဝင်ရောက်ခွင့်ပြုသည်။ ဝယ်လိုအား၊ မတည်ငြိမ်မှုနှင့်အခြားစျေးကွက်အခြေအနေများအပေါ် မူတည်၍ စျေးနှုန်းများမှာကွဲပြားသောကြောင့် ECN ပွဲစားမှတစ်ဆင့်စျေးနှုန်းသည်အလွန်နိမ့်သောလေလံ / ကမ်းလှမ်းမှုများပေါ်တွင်ကုန်သွယ်နိုင်သည်။
ဤအင်္ဂါရပ်သည် Forex ကုန်သည်များအနေဖြင့်အပေးအယူလုပ်ရန်မတတ်နိုင်သောအရာဖြစ်သည်။ ECN ပွဲစားများကကုန်သွယ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်သည်သေချာပေါက်သေချာသည်ကိုသေချာစေသည်။ အရောင်းအဝယ်၏ဤတိကျသောနည်းစနစ်သည်ဖောက်သည်အားပွဲစားနှင့်ကုန်သွယ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ဤကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းသည်မည်သူမဆိုတိုးတက်ကောင်းမွန်သောကုန်သွယ်မှုလုပ်ဆောင်မှုကိုနှစ်သက်စေသည်။
ECN ကိုယ်စားလှယ်များသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရည်အချင်းပြည့်ဝသော၊ အရည်အချင်းပြည့်ဝသော၊ ဘဏ္institutionsာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအတွင်းကုန်သွယ်ရန်အခွင့်အလမ်းများကိုခွင့်ပြုသည့်ပုံစံတစ်ခုကိုလုပ်ဆောင်ကြသည်။ ထို့အပြင်ချိတ်ဆက်ထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုမည်ကဲ့သို့ပို့လွှတ်သည်ဆိုသော်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုသည် ECN ပွဲစား၏နောက်ထပ်အဓိကအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်သည်။ ECN အေးဂျင့်များအားလုံးကိုတူညီသောစျေးကွက်အချက်အလက်နှင့်ကုန်သွယ်မှုကိုရယူခွင့်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ငွေအမြောက်အများပံ့ပိုးပေးသူများထံမှအခြေခံစျေးနှုန်းများကိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေသည်။
ECN ပွဲစားနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Forex ကုန်သွယ်မှုအကောင့်၏အဓိကအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုမှာအရောင်းအ ၀ ယ်ဖြစ်သည်။ Forex အရောင်းအ ၀ ယ်သဘောသဘာဝအရချိုးဖောက်မှုသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်မဟုတ်ပါ၊ သင် ECN ပွဲစားတစ် ဦး ၏အားသာချက်ကိုယူသောအခါ, သင်ဖြစ်ရပ်မှန်များလှုပ်ရှားမှုစီးဆင်းမှုကိုဖန်တီးဖွယ်ရှိဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူဖြစ်ရပ်များနှင့်သတင်းစဉ်အတွင်းကုန်သွယ်မှုနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည်မည်သည့်ကုန်သည်ကိုမဆို Forex စျေးနှုန်းမတည်ငြိမ်မှုမှအကျိုးခံစားခွင့်ရရှိစေသည်။
အဆိုပါ FXCC-ECN အားသာချက်ကဘာတွေလဲ?
ECN ကုန်သွယ်လှုပ်ရှားမှုအမည်မသိဖြစ်ပါသည်, ဒီကိုမှန်ကန်စျေးကွက်အခြေအနေများအားလုံးအချိန်များတွင်ထင်ဟပ်ဖြစ်ကြောင်းသေချာကုန်သည်များကြားနေစျေးနှုန်း၏အားသာချက်ယူခွင့်ပြုပါတယ်။ Forex ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာ, နည်းဗျူဟာ, ဒါမှမဟုတ်လက်ရှိစျေးကွက်ရာထူး: ဖြစ်စေအပေါ်အခြေခံပြီး client ကိုရဲ့လမျးညှနျဆန့်ကျင်ခြင်းမရှိဘက်လိုက်မှုရှိပါသည်။
FXCC-ECN clients များချက်ချင်းအတည်ပြုချက်နှင့်တကွ, ဈေး၌အကောင်းဆုံးက executable စျေးနှုန်းများ streaming, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ၏အားသာချက်ယူပြီး, ချက်ချင်း Forex ရောင်းဝယ်ဖောက်နိုင်။ အဆိုပါ FXCC-ECN မော်ဒယ်ထို့ကြောင့်အားလုံး FXCC အရောင်းနောက်ဆုံးဖြစ်ကြပြီးအဖြစ်မကြာမီသူတို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းနှင့်ဖြည့်နေကြသည်အဖြစ်အတည်ပြုခဲ့သည်, စျေးနှုန်းထုတ်လုပ်သူများကဝင်ရောက်စွက်ဖက်ကာကွယ်ပေးသည်။ ကြားဝင်စွက်ဖက်ရန်အဘယ်သူမျှမဖောက်စားပွဲခုံဆို Re-ကိုးကားအဲဒီမှာဘယ်တော့မှမဖြစ်ကြရှိပါသည်။
client, ငွေဖြစ်လွယ် access ကို
အဆိုပါ FXCC ECN မော်ဒယ် clients များ, စည်းကမ်းများအရည်အချင်းပြည့်မီခြင်းနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာငွေဖြစ်လွယ်ရေကူးကန်များတွင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ဖို့အခွင့်အလမ်းပေးထားပါတယ်။
automated Forex ကုန်သွယ် / ဈေးကွက်ဒေတာ feed ကို
FXCC ရဲ့ API ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်, client များအလွယ်တကူတိုက်ရိုက်စျေးကွက် data တွေကိုအစာကျွေးခြင်းနှင့်စျေးနှုန်းတူညီသည့်အင်ဂျင်မှသူတို့ရဲ့ကုန်သွယ် algorithms, ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး, မော်ဒယ်များနှင့်အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်။ FXCC ရဲ့တိုက်ရိုက်, ကြားနေဟာ executable ဈေးကွက်ဒေတာအများဆုံးယှဉ်ပြိုင်လေလံပါဝင်သည်နှင့်ဈေးကွက်ထဲမှာမဆိုပေးထားအချိန်တွင်ရရှိနိုင်စျေးနှုန်းများကိုမေးပါ။ နောက်ကျောကုန်သွယ်မော်ဒယ်များစမ်းသပ်, ဒါမှမဟုတ်တိုက်ရိုက်ကုန်သွယ်များအတွက်ဖြစ်စေသည့်အခါတစ်ဦးအကျိုးဆက်အဖြစ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်ကိုက်ညီနေဆဲဖြစ်သည်။
FXCC အဆိုပါလေလံ / ကမ်းလှမ်းမှုကိုပြန့်ပွားမထိန်းချုပ်ဘူးထို့ကြောင့်ငါတို့ရှိသမျှသည်အချိန်တိုင်းအတူတူပင်လေလံ / ကမ်းလှမ်းမှုကိုပြန့်ပွားမပေးနိုငျပါအဖြစ် FXCC တစ်ကုန်သည်သို့မဟုတ်စျေးကွက်ထုတ်လုပ်သူများထံမှကွဲပြားနေသည်။ FXCC variable ကိုစစ်မှန်တဲ့န့်ပေးထားပါတယ်။
တစ်ဦး ECN တွင်, client များစျေးကွက်စျေးနှုန်းများတိုက်ရိုက် access ကိုရှိသည်။ Market ကစျေးနှုန်းထောက်ပံ့ရေး, ဝယ်လိုအား, မတည်ငြိမ်မှုများနှင့်အခြားစျေးကွက်အခြေအနေများထင်ဟပ်အတက်အကျ။ အဆိုပါ FXCC-ECN မော်ဒယ်အချို့ဈေးကွက်အခြေအနေများအတွက်အချို့ဗိုလ်ကြီးအပေါ်တဦးတည်း PIP ထက်နိမ့်ဖြစ်နိုင်သည့်တင်းကျပ်စွာလေလံ / ကမ်းလှမ်းမှုကိုန့်, အပေါ်ကုန်သွယ်မှု clients များနိုင်ပါတယ်။